सुरुमा परमेश्‍वरद्वारा सृष्टि गरिएका आदम र हव्‍वा पवित्र मानिसहरू थिए, अर्थात्, अदनको बगैंचामा हुँदा तिनीहरू पवित्र, अशुद्धताले दूषित नभएका थिए। तिनीहरू यहोवाप्रति विश्‍वासयोग्य थिए, र यहोवालाई धोका दिने बारेमा तिनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। तिनीहरू शैतानको प्रभावको बाधारहित, शैतानको विषरहित थिए, र सारा मानवजातिमध्ये सबैभन्दा शुद्ध थिए, त्यही कारणले यसो भएको हो। तिनीहरू कुनै पनि अशुद्धताद्वारा अशुद्ध नपारिएका, शरीरको बसमा नपरेका अवस्थामा अदनको बगैंचामा बस्थे, र तिनीहरूले यहोवाको श्रद्धामा बस्थे। पछि शैतानको परीक्षामा परेपछि, तिनीहरूमा सर्पको विष पर्‍यो, र यहोवालाई धोका दिने इच्‍छा जाग्यो, र तिनीहरू शैतानको प्रभावमा जिए। सुरुमा, तिनीहरू पवित्र थिए र तिनीहरूले यहोवाको श्रद्धा गर्थे; यो अवस्थामा मात्रै तिनीहरू मानव थिए। पछि शैतानको परीक्षामा परेपछि, तिनीहरूले असल र खराबको ज्ञानको रूखको फल खाए, र शैतानको प्रभावमा जिए। तिनीहरूलाई शैतानले बिस्तारै भ्रष्ट बनाउँदै लग्यो, र तिनीहरूले मानिसको मूल स्वरूपलाई गुमाए। सुरुमा, मानिसमा यहोवाको सास थियो, ऊ अलिकति पनि अनाज्ञाकारी थिएन, र उसको हृदयमा कुनै दुष्टता थिएन। त्यो समयमा, मानिस साँच्चै मानव थियो। शैतानद्वारा भ्रष्ट गरिएपछि, मानिस जनावर बन्यो। उसका विचारहरू दुष्टता र अशुद्धताद्वारा भरिएका थिए, त्यसमा कुनै असल कुरा वा पवित्रता थिएन। के यो शैतान होइन र? तैँले परमेश्‍वरको कार्य धेरै अनुभव गरेको छस्, तैपनि तँ परिवर्तन वा शुद्ध भएको छैनस्। तँ अझै पनि शैतानको अधिकार क्षेत्रमा जिउँछस्, र परमेश्‍वरमा अझै पनि समर्पित छैनस्। यो विजय गरिएको तर सिद्ध नतुल्याइएको व्यक्ति हो। र त्यस्तो व्यक्तिलाई सिद्ध तल्याइएको छैन भनेर किन भनिएको? किनभने यस्तो व्यक्तिले जीवनलाई वा परमेश्‍वरको कार्य सम्‍बन्धी ज्ञानलाई खोजी गर्दैन, र शरीरको सुख-चैन र क्षणिक सहजताको मात्रै लोभ गर्छ। परिणामस्वरूप, तिनीहरूको जीवनको स्वभावमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, र परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएको जस्तो तिनीहरूको मूल स्वरूपलाई तिनीहरूले पुनः प्राप्त गरेका छैनन्। त्यस्ता मानिसहरू जिउँदो लासहरू हुन्, तिनीहरू आत्मा नै नभएका मृतक मानिसहरू हुन्! आत्ममा तत्वहरूको ज्ञान खोजी नगर्नेहरू, पवित्रता खोजी नगर्नेहरू, र सत्यता अनुरूप जिउन नखोज्नेहरू, नकरात्मक पक्षमा मात्रै विजय गरिएकोमा सन्तुष्ट हुनेहरू, र परमेश्‍वरको वचनअनुसार जिउन र पवित्र मानिसहरू बन्‍न नसक्‍नेहरू—यिनीहरू त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसलाई मुक्ति दिइएको छैन। किनभने, यदि ऊ सत्यविहीन छ भने, परमेश्‍वरका जाँचहरूको अवधिमा त्यो मानिस दह्रिलो गरी खडा हुन सक्दैन; परमेश्‍वरका जाँचहरूको अवधिमा दह्रिलो गरी खडा हुन सक्‍नेहरू मात्रै मुक्ति पाएकाहरू हुन्। म पत्रुसजस्ता मानिसहरू, सिद्ध तुल्याइन खोज्ने मानिसहरू चाहन्छु। आजको सत्यता तिनीहरूलाई नै दिइन्छ जो यसको लागि उत्कट इच्छा गर्छन् र यसको खोजी गर्छन्। परमेश्‍वरबाट मुक्ति पाउन इच्छा गर्नेहरूलाई नै यो मुक्ति दिइन्छ, र यो तिमीहरूले मात्रै प्राप्त गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन। यसको उद्देश्यचाहिँ तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले प्राप्त गर्नुभएको होस् भन्ने हो; तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले प्राप्त गर्न सक्‍नुभएको होस् भनेर तिमीहरूले परमेश्‍वरलाई प्राप्त गर्छौ। आज मैले यी वचनहरू तिमीहरूलाई बताएको छु, र तिमीहरूले ती सुनेका छौ, र तिमीहरूले यी वचनहरू अनुसार अभ्यास गर्नुपर्छ। अन्त्यमा, तिमीहरूले यी वचनहरूलाई अभ्यास गर्ने समय नै मैले यी वचनहरूद्वारा तिमीहरूलाई प्राप्त गरेको क्षण हुनेछ; यसको साथै, तिमीहरूले यी वचनहरूलाई पनि प्राप्त गरेका हुनेछौ, अर्थात्, तिमीहरूले यो सर्वोच्‍च मुक्तिलाई प्राप्त गरेका हुनेछौ। तिमीहरूलाई एक पटक शुद्ध पारिएपछि, तिमीहरू वास्तविक मानव बनेका हुनेछौ। यदि तँ सत्यतामा जिउन, वा सिद्ध पारिएकोजस्तो गरी जिउन सक्दैनस् भने, तँ मानिस होइनस्, तर एउटा जिउँदो लास, पशु होस्, किनभने तँ सत्यविहीन छस्, जसको अर्थ के हो भने तँ यहोवाको सासविहीन छस्, त्यसैले तँ आत्मा नभएको मृतक मानिस होस् भनी भन्‍न सकिन्छ! विजय गरिएपछि साक्षी दिनु सम्‍भव भए तापनि, तैँले थोरै मुक्ति बाहेक केही पनि प्राप्त गर्दैनस्, र तँ आत्मा भएको जीवित प्राणी बनेको छैनस्। तैँले सजाय र न्यायको अनुभव गरेको भए तापनि, यसको परिणामस्वरूप तेरो स्वभाव नवीकरण वा परिवर्तन भएको छैन; तँ अझै पनि तेरो पुरानो मनुष्यत्व होस्, तँ अझै पनि शैतानको स्वामित्वमा छस्, र तँ शुद्ध पारिएको मानिस होइनस्। सिद्ध बनाइएकाहरू मात्रै मूल्यवान् छन्, र यस्ता मानिसहरूले मात्रै साँचो जीवन प्राप्त गरेका छन्।